Egwuregwu 9 kachasị mma Androidsis nke February 2021 | Gam akporosis
Taa ka anyị wetara gị egwuregwu 9 kachasị jụụ nke gafere ahịrị anyị na February a (na ntakịrị ntakịrị site na njedebe nke ọnwa Jenụwarị). Egwuregwu dị iche iche na nke anyị na-agba gị ume ka lee na vidiyo nke anyi buputara na uzo YouTube nke Androidsis anyi.
Eziokwu a ọnwa dị mma iji nweta egwuregwu n'efu n'efu na nloghachi nke onye anyị chọrọ n'ezie, ma e wezụga ndị ọzọ na-a drinkụ ihe ọ ofụ ofụ sitere n'ike mmụọ nsọ nke Archero dị. Gaa maka ya.
1 Usoro Ọchịchọ Dragọn
3 Ọduọ Moba Xtreme
4 Onye na -ebute ọrịa 3
5 Cgbọ ala Project
6 Ọkachamara n'akụkọ ifo
7 Ubwa Cubiaventuras
Usoro Ọchịchọ Dragọn
Square Enix na-ewetara anyị nke a ohuru freemium gacha dabere na saga ya ya na oke eserese nke Akira Toriyama na ndi odide ka ha gaa n’egwuregwu egwuru egwu nke oma nke anyi gha aghabe nkeji na agha ka ha gha agha iru onwe ha anya. Gacha yabụ ị ga-emegherịrị ndị dike ọhụrụ na anụ ụlọ.
A egwuregwu nke uzo na-adabere na atumatu di elu na nke anyị ga-amata otu esi ejikwa nkeji anyị iji debe ha na oghere ndị ahụ nke ha nwere ike ịkọ ọgwụ na-ajụ, ma ọ bụ jiri mma agha ha weta onye iro ahụ. Egwuregwu na-emebi emebi nke dị na Spanish nwere agwa pụrụ iche nke ị na-agaghị echefu.
Developer: Nnukwu nkuzi Nnyocha AB
Victor Ruiz, otu n'ime akụkọ ifo nke vidio vidio na mba anyị na PC Fútbol ma ọ bụ Ihe ndị anyị na-egwu na Amstrad na ụdịdị dị iche iche, ọnọde a Arcade ọduọ egwuregwu nke anyị na-ejikwa ụgbọ ala anyị nso. Egwuregwu ọtụtụ egwuregwu na ụgbọala ndị nwere akụkọ ifo ị nwere n'efu.
Onye na -ebute ọrịa 3
Egwuregwu Armor Ọ na-ewetara anyị otu egwuregwu ọ masịrị anyị n'ihi na ọ na-atọ ụtọ na nnukwu ahụ riri ya ahụ. Ị ga-emerịrị ya idebe zombie virus na spawn zombies Ka ha mee ka ndị bi n’obodo niile dị n’elu ụwa ụjọ. Addiction addictionụ ọgwụ ọjọọ dị ọcha na pikselụ gị.
Gamevil na-ewetara anyị freemium a nwere nnukwu mma na ịgba ọsọ ịgba ọsọ, mana nke anyị nwere pịa ihuenyo iji mee ngwangwa, breeki ma ọ bụ wepu okporo pụọ ngwa ngwa o kwere mee. Ọ nwere ama ama na ezigbo ọrụ nke Gamevil mgbe ekwusara egwuregwu na gam akporo.
Ọkachamara n'akụkọ ifo
Ọbụna ugbua ịnọ na beta, anyị dabara na ịhụnanya nke rogue a nke anyị ji aka nke dibịa anwansi na onye na-a drinksụ mmiri si n'ike mmụọ nsọ nke Archero pụtara maka ọtụtụ. Na-arụ ọrụ nke ọma na ọkwa eserese na ike niile a ga-atụ anya na aha dị ka nke a iji kpọọ ọtụtụ izu.
Aghọọ nke anyị arcade egwuregwu nke ọnwa maka imewe talent nke ndị odide ahụ na onye protagonist yana anụ ụlọ ha. Sara mbara sekit na nke anyị nwere na-amụ anya na-atụgharị, igosi combos, okpukpu abụọ ma na-echekwa ndị isi ikpeazụ ihu. Jụụ.
El pink na-ewe ikike niile en ihe ịtụnanya a dị ịtụnanya na egwu kọmputa yana 50 ọkwa nke ga-anwale gị. Onye ọ bụla n'ime ha dị iche iche, ị ga-echekwa ihu na mmụọ sara mbara iji merie ha. Egwuregwu talent na ọmarịcha n'agbanyeghị ebe ịlere ya.
Ndị ọzọ magburu onwe archero edinam rogue Nke ahụ -abụ otu n’ime ọnwa kacha mma nke ọnwa Febụwarị. Anyị na-achịkwa nwa pusi na ndị ọrụ ibe ya ga-eji mma agha ha ga-eche ndị iro ihu. Ee ọ bụ eziokwu na ọ dị obere, ebe ọ bụ na ebe a anyị kwesịrị ilekọta ndị agha anyị iji melite ha na ọbụlagodi dochie ụfọdụ. Arụ ọrụ nke ọma na ọkwa ọhụụ.
Ndị a bụ The 9 ọtụtụ jụụ Androidsis egwuregwu nke ọnwa nke February 2021, anyị na-akpọkwa gị ka ị mara egwuregwu ikpeazụ nke ọnwa ndị gara aga nwere ọtụtụ; ndị nke Jenụwarị 2021; CODE ọsọ dị ka coolest site na ọnwa ikpeazụ nke 2020; ma ọ bụ 25 karịa oyi nke afọ dum 2020.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » [Na] 9 coolest Androidsis egwuregwu nke February
Etu esi etinye Apple TV ngwa na gam akporo TV